Behleli ngaphesheya nje Guanabara Bay kusukela Rio de Janeiro wakhe udadewabo-umuzi laseNiterói, ukwabelana ukuxhumana eyingqayizivele futhi ejulile yangekhulu kakhulu ekuqaleni ezimbili. Okunenjongo namuhla kwaba esikhathini esidlule, laseNiterói unezela lonke isici esisha ekutholakaleni Rio de Janeiro umuzi kanye State.
Ingxenye ye I LOVE Rio ifilosofi sika lusabalale HORIZONS amasiko isimo Rio, ingosi ihlanganisa ngokuningiliziwe izici ezihlukahlukene ikhathalogi laseNiterói zamasiko Inhliziyo. Emabhishi ngasese, izakhiwo, iminyuziyamu, zokubukela amabhayisikobho, amapaki, izinkambo, imibono ezihlaba umxhwele, zokudla, yeshashalazi, ezemidlalo imincintiswano futhi ukuzilibazisa , kanye engqondweni ukuba kwezinkathi ezibalulekile emlandweni ndawo, libeke kalula laseNiterói at the heart of the yembuso ebabazekayo, amasiko kanye kungamanyathelo kwenhlakanipho.
IDOLOBHA KUPHELA Brazilian Wasekelwa zamaNdiya YOMDABU
LaseNiterói uhlezi Guanabara Bay nje ngaphesheya Rio de Janeiro, ne ibanga cishe 7 ngamakhilomitha phakathi ezimbili, kanye elixhumanisa imizi. LaseNiterói, noma kunalokho, izwe Yikuphi laseNiterói manje ithatha, ekuqaleni ngokuthi iSt Lawrence amaNdiya Lapho kuqala bazinza 1573 by Araribóia, induna Tupi-Guarani - lingumuzi kuphela waseBrazil sasungulwa ngo umholi zomdabu.
LaseNiterói ingenye izifunda ezibaluleke kakhulu emlandweni Rio de Janeiro yembuso, nge esidlule kakhulu ocebile futhi okuphawulekayo. Namuhla, kuba umuzi yesihlanu ngobukhulu esifundazweni, ihlukaniswe 52 omakhelwane, enabantu nxazonke 500,000.
Kuyinto umuzi yezimfanelo esiphezulu wokuphila Brazil, futhi ine imali eningi kunabo lengenako kanye esiphezulu literacy izinga esifundazweni. Futhi lugcwele izinto iminyuziyamu ethakazelisayo, izikhumbuzo zomlando kanye aluhlaza nekwandzisa green lujula.
Ngokujulile futhi isici exhunywe Rio de Janeiro emzini ngokomlando, ngamasiko, kanye ngokwendawo, laseNiterói shouldnt abe phezu uhambo wonke umuntu ngesikhathi evakashele enhlokodolobha, sinikeza nombono omusha esifundeni jikelele futhi iyikhaya sezakhiwo eyingqayizivele ngempela ongenakulibaleka eziningi Ngimaphi kalula kufinyeleleke Rio de Janeiro.
Coat laseNiterói sika izingalo has izinsuku ezintathu uqoshwe kwalo: e 1573, 1819 no 1835. I isibhakela Lezi izinsuku Kushiwo unyaka olusemthethweni ekusungulweni emzini Araribóia, lo temiminós abakhulu Indian owayefike Been expresso e ukusiza by the isiPutukezi imizamo yempi ngokumelene French. Leli dolobhana, okuthiwa São Lourenço dos Indios, wamiswa phezu entabeni, okwenza cishe ehlasela isimanga engenakwenzeka. Kukulo muzi wokuqala futhi kuphela eBrazil Abaye esasungulwa amaNdiya.
Ngalesi ekhulu lokuqala, isifunda wathola ezinye izifiki ezifana amaJesuit abafake epulazini ukukhiqizwa kokudla. Ukuthuthukiswa Kwezomnotho kwaba asiqokomisa ekukhiqizeni amapulazi, ushukela Izigayo, ezohwebo kanye zokuthutha.
Lapho iNkosi uJoão VI futhi enkantolo wakhe befika kuleli koloni LwaseBrazil 1808, inani ezifundeni esifundeni wathola izenzakalo eziphawulekayo, ephawuleka kakhulu St. John Icaraí (St. John of Icaraí), Santo Domingo (Saint ngamaSonto) kanye Praia Grande (Big Beach), lapho kugujwa usuku lokuzalwa kwakhe. Ngo-1819, usuku lwesibili on ijazi dolobha ye izingalo, esifundeni yasungulwa kuze Vila Real Praia Grande (Royal Village of Big Beach), futhi kusukela que iphuzu on ungubani zaso zezombangazwe nezenhlalo lenziwa kwehlukene ke emzini Sao Sebastiao do Rio de Janeiro (Saint Sebastian of Rio de Janeiro).
Ngo-1835, usuku lwesibili ebalulekile emlandweni komuzi, nini Real Vila da Praia Grande (Royal Village of the Big Beach) decreed the dolobha yesifundazwe kanye Rio de Janeiro, esihlalweni uhulumeni jikelele.
Kwakuthinta Ngakho waphakanyiselwa isimo emzini aqanjwa kabusha Nictheroy, Yikuphi ngokuvamile okucatshangwa ukuthi kusho "amanzi efihliwe" in Tamoios ulimi lomdabu. Ngo-1841 emzini yazuza zibizwa of "Imperial City" by wavakashela umbusi young Dom Pedro II for yemikhosi futhi imidlalo yaseshashalazini. Kancane kancane kwathiwa esivuselelwe kuhambisana Plan Taulois (Talouis Plan), lakhiwa engineer French Pedro Taulois. lo mzamo ngempumelelo kabili edolobheni laseNiterói.
Intuthuko enhlokodolobha Babenawo olwengeziwe Kwasetshenziswa, ezifana isikebhe umusi e 1835, whale amafutha ukukhanyisa zomphakathi e 1837, izibani igesi ngo-1847, amanzi ngo-1861, le laseNiterói Railroad, oxhumanisa umuzi isimo letibanti 1872, futhi streetcars kagesi ngo-1883.
Ngo-1894, ngenxa uchungechunge yokuvukela nokuhlaselwa komuzi, enhlokodolobha wadluliselwa Petrópolis. Nokho, laseNiterói wabuyiselwa enhlokodolobha 1903, Yikuphi kwaphawula enkathini ukungenelela ezibalulekile zasemadolobheni.
Ngo-1906 ukukhanyisa kagesi kanye endle base efakwe futhi trams kagesi Waqala esikhundleni abanhliziyo imbongolo-wadonsa. The Casino Icaraí (Icaraí Casino) wabangisa the Cassino da Urca (Urca Ikhasino) e Rio de Janeiro emzini, featuring ehhotela, restaurant nokugembula amakamelo, kanye namagama okukhulu Brazilian naseLatin umculo American.
In the 1970 uMongameli Costa e Silva Bridge (President Costa kanye Silva Bridge) yayakhiwe, eyaziwa kangcono Rio-laseNiterói Bridge, omunye imporant kakhulu sezakhiwo engineering eBrazil. Umthetho omusha In 1974 kwabangela zithi Guanabara futhi Rio de Janeiro ukuze kuhlangane, kuphumele laseNiterói enhlokodolobha kokuba eside. Lokhu kwaholela ezinguqukweni eziningi futhi okuningi labantu laseNiterói ukuba zifuduke.
In the 1980, umuzi balithola ifa layo zamasiko ubizo. Izakhiwo Okubalulekile futhi izingosi zazakhiwa futhi abuyiselwe, ezifana Municipal Theatre João Caetano (João Caetano Municipal Theatre) kanye Church of São Lourenço dos Indios (Saint Laurence Church of the Indigenous).
Namuhla, laseNiterói ingenye imizi ebaluleke kakhulu eBrazil, futhi ekhaya ezihlukahlukene ezikhangayo nezenzakalo que KOKUBILI imi Bona kanye kulandiswe ngobuhlobo obuseduze futhi uxhumano ejulile amasheya umuzi Rio eseduze de Janeiro.
Omunye ezikhangayo kugujwa kakhulu laseNiterói iyona yisakhiwo sodumo "Museum of Contemporary Art MAC," Museum of Contemporary Art and uphawu komuzi. Kwadalwa umakhi odumile Oscar Neimeyer, ukusungulwa eliyindilinga UFO-inama ukubukwa oncomekayo phezu Gunabara Bay kanye Corcovado futhi Sugar Loaf Mountains. Neimeyer Kucatshangwa Museum ukuba 'into okubi landscape, inyoni white flying phezu esibhakabhakeni kanye nolwandle laseNiterói, "noma" imbali owazalwa ngo edwaleni. "Owavulwa ngo-1996, kube reference umhlaba wonke in art, izakhiwo kanye nezokuvakasha.
Eminye iminyuziyamu ezibalulekile nemipheme zihlanganisa Museu de Arte Sacra (Museum of Art Engcwele), ekhaya iqoqo ocebile ezenziwe ngobungcweti zomlando kanye zenkolo, kanye Archaeological Museum Itapu (Archaeological Museum of Itapu) Yikuphi uyalandisa neraly 8,000 iminyaka ndawo umlando. Phakathi avelele iqoqo kukhona ezifakwa amagobolondo, zomculo, amatshe, amathambo womuntu kanye nezinye izinto que zifakazela kwansuku ukuzingela, ukudoba nokubuthanela nemikhuba esifundeni wasolwandle ngaphambi ekutholakaleni Brazil. The Solar Jamberoo is a inxuluma babeyonqoba, elakhiwa ngo-1872, kanye tile amahle, mbumbulu nesishiyagalolunye leminyaka, balcony kanye nokucwala.
Okubalulekile izindawo zomlando emzini zihlanganisa "Forte da Boa Viagem," lesikhumbuzo mlando we ngesikhathi kusabusa uhulumeni, Yikuphi ngokusankondlo ecabanga Guanabara Bay. Enye iyona "Fortaleza de Santa Cruz" (Santa Cruz Fortress), wakha e 1555, anabamemezeli ukuqoqwa nesishiyagalombili futhi nesishiyagalolunye izibhamu leminyaka yesonto kusuka 1612.
The izimangaliso zemvelo nasezindaweni ezizungeze laseNiterói kukhona KOKUBILI Eminingi nolwesabekayo. Umuzi linezincazelo eziningi emabhishi umbukwane, kuhlanganise Icarai, Yikuphi owaziwa kakhulu edolobheni, ngaphakathi alimondi zikakhukhunathi imithi. Praia do Sossego (Ukuphumula Beach), Itapu futhi Itacoatiara kukhona Futhi ayigugu egudla ugu omuzi. LaseNiterói has KOKUBILI ocean-ebhekene emabhishi amagagasi anamandla ekahle surfing kanye nezemidlalo, namabhishi bay-ezibhekene nazo emanzini azolile ekahle izinto ezenziwa umkhaya futhi aziphumulele.
On the Wilder oceanfront, amabhishi ezifana Prainha de Piratininga, Itaipu beach kanye langa Itacoatiara Beach akufanele ezingabanjwanga. Itacoatiara beach, izidleke ezansi Elephant Rock futhi lizungezwe Nemvelo enhle mansions, ubhekwa emabhishi amahle kakhulu e yonke wombuso. Eduze Itaipu Beach Futhi Itaipú Lagoon, a Lagoon izothile lapho abaningi ukuya ukudoba, ukubhukuda futhi uphumule.
Isifunda inama Futhi uhla nekwandzisa green esimnandi. "City Park," noma City Park, unikeza imibono elihle ogwini olunesihlabathi laseNiterói, kanye umbono omangalisayo ngempela esifundeni, kuhlanganise Guanabara Bay, Sugarloaf futhi UKhrestu. Indawo Futhi indawo efiselekayo kakhulu paragliding, ngenxa yokuphakama, imibono, futhi imimoya umxhwele evumayo.
The Serra da Tiririca indawo enkulukazi aluhlaza Atlantic Forest, elinezindawo orchid kanye zasendle zemvelo, ezifana armadillos, skunks kanye onogwaja. "Elephant Stone," noma Elephant Rock, ikhona kwi iphuzu esiphezulu Serra da Tiririca, phakathi elula ngokumema of Itapúaçu kanye Itacoatiara emabhishi futhi lizungezwe Rainforest aluhlaza. The rock omkhulu, Yikuphi amabhara i zifana umxhwele ikhanda indlovu, unikeza imibono emangalisayo panoramic of Rio - the que ezilwandle ethangeni ngokumelene amatheku laseNiterói, eziqhingini Maricás, futhi izintaba ngokubabazekayo.
Ngaphezu kwalokho, ukhonkolo nodedangendlale Serra da Tiririca State Park iqukethe izintaba futhi ekhuphuka ezidonsela ezifana Alto Mourão futhi Morro das Andorinhas, esihlanganisa ukubukwa amazing nezimila abacebile, eceleni ekunikeleni emizileni abanemibono umbukwane, ngo-1992 epaki yaqanjwa ngokuthi umhlaba Biosphere Reserve by UNESCO.
Izenzakalo Annual e laseNiterói, ziye zafinyelela izinga yenhlangano kanye nokugqugquzela eminyakeni yamuva que kwaba ezingabonwayo elisanda njengoba Aug eyishumi - kunomthelela zihlanganisa ukukhula ezokuvakasha kanye labantu endaweni Guanabara Bay, futhi kumiswa izinhlangano Que behlangene entsha amaphrojekthi kanye kusiza ukuba sembule ezivele zikhona.
The izinyanga December, January futhi February bavame lizungeza bendabuko eningizimu izenzakalo Nenkabazwe ehlobo afana noKhisimusi, New Year (Réveillon) kanye Zomkhosi. The official Réveillon iqembu lwenzeka Praia de Icaraí, omunye emabhishi edume kakhulu laseNiterói. On lokhu beach, izinsuku ezintathu abantu ukulindela zilungiselele emaphathini for the day big, futhi ngenxa yalokhu-Réveillon pre emkhathini kukhona lokwentiwako eziningana musical, kusukela Rock ukuba Samba, kuyilapho kuqhunyiswa iziqhumane zokudlala bayahlolwa.
July kuletha umkhosi ebusika, lapho lihlanganisa nengcebo izenzakalo isinyathelo yezemidlalo ezifana ubuqhawe namabhodi okushibilika, ngesikhathi marina São Francisco Beach, futhi mqhudelwano paragliding, ngesikhathi Parque da Cidade, phezu Morro da viração. The Ngaphezu entsha emkhosini nguye owela Stand-Up Paddle Jurujuba-Icaraí, okuyinto ikhanda ukuthandwa elikhulayo lokhu twist entsha on surfing.
Ngo July, 'laseNiterói em cena' amabutho umuzi, noma laseNiterói umkhosi emfushane, lapho izingcezu amadlingozi imizuzu 15 noma ngaphansi ubude embukisweni for a panel oprofesa nabaqondisi ezikoleni yaseshashalazini zendawo, kanye nomphakathi jikelele.
It is a Umbukiso ukuncintisana iDemo yaseshashalazini yizicucu kanye nemiklomelo ikhokhelwe phezulu imidwebo emithathu phakathi abadala kanye nezingane ngaphezu wemidlalo umhlabeleli. Ngo-Agasti, the laseNiterói Jazz Festival kuletha ndawonye abaculi bendawo nabanye emhlabeni brazil kanye nezwe ukwenza khulula amakhonsathi ongaphandle - kuphela umcimbi wokuvula kuyinto kuphela abanikazi ithikithi.
Kuwo wonke unyaka plethora wobuciko, ezemidlalo kanye namasiko nemicimbi pepper ikhalenda nokuqinisekisa nokulinganisela okuhle kwezenhlalo, kwezamasiko, futhi zokungcebeleka landscape laseNiterói sika.
LaseNiterói athuthukile eceleni Rio de Janeiro emzini, futhi like siblings bona ligcwaliswe for umusa, ezezimali kanye nokwesekwa engakuthola kumalunga oyise ukubusa-abenzi.
Esikhathini esidlule laseNiterói wathatha isinyathelo njengeNkosi ebusayo dolobha yesifundazwe, kodwa kusukela ngo-1974, lapho States of Guanabara futhi Rio de Janeiro aye ahlanganiswa namanye, isihloko laseNiterói sika capital kubuyisiwe. Lezi imizi udadewabo ziye ogxile ezimise umlando komunye nomunye, futhi imfundiso yabo Okusizayo okwakhayo omelelwa ingqalasizinda omangalisayo futhi design ibhuloho Rio-laseNiterói, lapho uba ngentambo ekuhlanganiseni labantu, isiko kanye ukuzilibazisa kokubili imizi.
Museum Yobuciko Wesimanje
Emabhishi kanye Amachweba